Paartileen siyaasaa Oromoo: Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga’eerraa sadarkaa itti aanutti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPaartileen siyaasaa Oromoo: Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga’eerraa sadarkaa itti aanutti
Paartileen siyaasaa Oromoo: Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga’eerraa sadarkaa itti aanutti
Paartileen siyaasaa Oromoo
[OBN 29 10 2010] Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga’eerraa sadarkaa itti aanutti ceesisuuf Gamtaan Barattoota Oromoo Yuunvarsiitiiwwanii kaka’umsa mataasaa fudhachuun waamicha jaarmiyaalee siyaasaa Oromootif dhiyeessen kaleessa waaree booda Giddu Gala Aadaa Oromootti mariin adeemsifameera.
Gamtaan barattoota Oromoo waltajjiin marii qopheesse kun, dhaabbileen siyaasaa Oromoo walitti siqanii akka mari’ataniif karra saaqera.
Gamtichi fedha jaarmayaalee siyaasaa Oromoorraa qabu barreeffama beektonni yuunvarsiitii dhiyeessaniin akeekera.
Yuunvarsiitii Finfinneetti barsiisaan hoggansaa fi imaammataa Dooktar Huseen Kadir jaarmiyaaleen maqaa Oromootin socho’an tooftaa qabsoo barri gaafatuun deemuun akka irra jiraatu waraqaa marii waltajjichaaf dhiyeessaniin akeekaniiru.
Barreeffama dabalataa bay’achuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanarratti kan dhiyeessan kaadhimamaa Dooktaraa Yuunvarsiitii Finfinnee fi barsiisaan Yuunvarsiitii Mattuu Buzaayyoo Dagafaan, carraan amma jiru kuni isa murtee dhumaa ga’e ta’uu kaasaniiru.
Jaarmiyaalee siyaasaa maqaa Oromootin hundaa’an fedhii ummata Oromoo jiddu galeeffatanii socho’uu akka qabanis ibsaniiru.
Maqaa walxureessaa badii kana dura walitti raawwatames walitti odeessaa sanaan turuun hin barbaachisu, amma boqannaa haaradhaan ummata waliin tarkaanfachuun barbaachisaadha jedhameera.
Hoggansa paartilee siyaasaa Oromoo biyya galan keessaa waltajjii marichaarratti kan argaman jaal Liiban Waaqoo; Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa irraa, jaarmiyaaleen Oromoo walitti siqanii mari’achuun bu’aa ummataatif dhaabbachuu qabu jedhan.
Dura taa’aan Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee jaal Abbaa Nagaa Jaarraa haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru ummata qabsoofnef akka hojjannu carraa jabaa uumeeraan kaasan.
Waamicha mootummaan biyyanaa taasise battalatti fudhachuun kan biyya galee fi miseensi koree hoji raawwachiiftuu Adda Dimokraatawaa Oromoo Dooktar Hasan Huseen, Oromoo boonsuu malee qaanessuu hin feenu, tokko ta’uufis qeerroo irraa abdii qabna jedhan.
Bakka buutonni Koongirasii Federaalistii Oromootis qabsoon Oromoo akka ce’uuf, jabaannee ni hojjenna jedhaniiru.
OPDOn Muka ofirratti muruu eegalaa jirti